ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက သူ့ပရိသတ်တွေဆီကနေ အလှူငွေတွေကောက်ခံပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အောက်ဆီဂျင် လှူဒါန်းပေး မယ့် SINON – Shwe Yoe
Sinon Loresca ဟာ Cat Walk King အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားသလို မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်လည်း အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါနော်။ Sinon ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုသာမက ရိုးသားတဲ့ ပြည်သူတွေကိုပါ ချစ်ခင်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို
အလှူအတန်းတွေလည်း လုပ်တတ်ပါသေးတယ်နော်။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ချို့တဲ့သူတွေကိုလည်း ကာလဒါနလေးတွေ လုပ်တတ် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်အားပေးကြတာပါ။ အခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရမ်းကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်
လိုအပ်နေတဲ့ပြဿနာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ့် အကြောင်းလေး ဝေမျှလာတာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိတဲ့ သူရဲ့ပရိသတ်တွေဆီကနေပြီး အလှူငွေများကောက်ခံကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို အောက်ဆီဂျင် လှူဒါန်းပေးမယ့် အစီအစဉ်လေးပါ။
ဒီအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျတော်ချစ်သော မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရေ အခုမြန်မာမှာဖြစ်နေတဲ့ COVID -19 THIRD WAVE ကြောင့် တော်တော်ဆိုးဆိုး ဒု.က္ခ.ရောက်နေတယ်လို့ ကျတော်ကြားသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျတော်နောက်အပတ်ထဲမှာ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိကြတဲ့ ကျတော့်ပရိသတ်တွေဆီက ကျတော် အလှူငွေ ကောက်ခံပါ့မယ် ရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို မြန်မာမှာ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရအားတင်းထားပါအုံး မြန်မာ ပြည်ကြီးနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရေ
ခင်ဗျားတို့မှာ ကျတော်ရယ် ကမ္ဘာကြီးရယ် ကျန်ပါသေးတယ် ကျတော်တို့တူတူ အခက်အခဲမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြမယ် ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားရာ တကယ်ကို လေးစားစရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်နော်။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
Sinon Loresca ဟာ Cat Walk King အဖွဈ ထငျရှားကြျောကွားသလို မျောဒယျလျ၊ သရုပျဆောငျအဖွဈလညျး အောငျမွငျနသေူတဈယောကျပါနျော။ Sinon ကတော့ မွနျမာနိုငျငံကိုသာမက ရိုးသားတဲ့ ပွညျသူတှကေိုပါ ခဈြခငျပွီး မကွာခဏဆိုသလို
အလှူအတနျးတှလေညျး လုပျတတျပါသေးတယျနျော။ လမျးမှာတှတေဲ့ ခြို့တဲ့သူတှကေိုလညျး ကာလဒါနလေးတှေ လုပျတတျ တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျအားပေးကွတာပါ။ အခုလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ အရမျးကိုအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ အောကျဆီဂငျြ
လိုအပျနတေဲ့ပွဿနာကို ကူညီဖွရှေငျးပေးမယျ့ အကွောငျးလေး ဝမြှေလာတာပါ။ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာ ရှိတဲ့ သူရဲ့ပရိသတျတှဆေီကနပွေီး အလှူငှမြေားကောကျခံကာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ လိုအပျတဲ့နရောတှကေို အောကျဆီဂငျြ လှူဒါနျးပေးမယျ့ အစီအစဉျလေးပါ။
ဒီအလှူနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကတြျောခဈြသော မွနျမာပွညျသူပွညျသားတှရေေ အခုမွနျမာမှာဖွဈနတေဲ့ COVID -19 THIRD WAVE ကွောငျ့ တျောတျောဆိုးဆိုး ဒု.က်ခ.ရောကျနတေယျလို့ ကတြျောကွားသိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကတြျောနောကျအပတျထဲမှာ
ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာရှိကွတဲ့ ကတြေျာ့ပရိသတျတှဆေီက ကတြျော အလှူငှေ ကောကျခံပါ့မယျ ရလာတဲ့ပိုကျဆံတှကေို မွနျမာမှာ အောကျဆီဂငျြလိုအပျနတေဲ့သူတှကေို လှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျရအားတငျးထားပါအုံး မွနျမာ ပွညျကွီးနဲ့ပွညျသူပွညျသားတှရေေ
ခငျဗြားတို့မှာ ကတြျောရယျ ကမ်ဘာကွီးရယျ ကနျြပါသေးတယျ ကတြျောတို့တူတူ အခကျအခဲမှနျသမြှကို ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျကွမယျ ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားရာ တကယျကို လေးစားစရာ ကောငျးလှနျးပါတယျနျော။ လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.
ဂတုံးနဲ့ လည်း ဆက်ဆီကျတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အားကစားဝတ်စုံလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ မျက်ဝန်း
တင်းကိတ် နေတဲ့ ရွှေရင်အမြွှာ ကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် အမှူး